အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းအနုပညာအတွက်ဘာကိုအာရုံစိုက်သင့်သလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းအနုပညာအတွက်ဘာကိုအာရုံစိုက်သင့်သလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-17 မူလ:ဆိုက်ကို
မြို့တော်တွင်နေထိုင်သောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ခွေးများအတွက်လှုပ်ရှားမှုနေရာသည်အဓိကအားဖြင့်အိမ်တွင်းတွင်အာရုံစူးစိုက်သောအိမ်တွင်း၌ (အများအားဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့) ဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသောလက်သည်းများသည်မြေကြီးကိုမတည်ငြိမ်သော, ချော်နေချော်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းကျဆင်းသွားပြီးပြင်းထန်သောရောဂါများတွင်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်နာကျင်မှုအလွန်ရှည်သောခြေသည်းများ၏ဇာတိပကတိ၌လက်သည်းများကိုရှည်လျားစွာကပ်ထားလိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်ကိုမကောင်းသည်သာမကလက်သည်းများသည်အရွယ်ရောက်သူနှင့်ကလေးများကိုအလွယ်တကူထိခိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ခွေးနှင့်ပိုင်ရှင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်လက်သည်းများကိုဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အိမ်တွင်ကြွေထည်ကြသောကြွေထည်များကခွေး၏ကြိတ်ဆုံကြိတ်နိုင်စွမ်းကိုကျေနပ်မှုမရနိုင်ပါယင်းအားဖြင့်လက်သည်းသူ့ဟာသူလမ်းလျှောက်နေစဉ်ခွေးသည်ကြောင်တစ်ကောင်နှင့်မတူပါယင်းဖျာထဲသို့ယက်။ ခွေး၏လက်သည်းများသည်ပိုမိုကြာမြင့်လာသောအခါကွေးများသည်မြေပေါ်သို့ရောက်သွားပြီးလက်သည်းများကိုအသားအရေကိုတွန်း တင်. နာကျင်စေပြီးနာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီတော့ခွေးကောက်ယင်းနာကျင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလက်သည်းယင်းလက်ချောင်းများအပြင်ဘက်ဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက်အပြင်ဘက်အဆစ်များ၏ပုံပျက်သောလက္ခဏာများသည်ခွေး၏ခြေထောက်များနှင့်တစ်ကိုယ်လုံး၏အရိုးများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
2 ။Paronychia ဖြစ်ပေါ်စေ
peeing သို့မဟုတ် defecation ပြီးနောက်ခွေးနှင့်အတူမြေပြင်ကန်ဖို့ကြိုက်တယ်ယင်းခြေထောက်များသမင်ဒရယ်။ အကယ်. လက်သည်းများသည်ယခုအချိန်တွင်ရှည်လျားလွန်းပါကလက်သည်းများကိုဇာတိပကတိသို့နစ်မြုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဇာတိပကတိ၌ထည့်သွင်းထားသောလူသားတစ် ဦး ကဲ့သို့ပင် Paronychia ကဲ့သို့သောပြ problems နာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အကယ်. ခွေး၏လက်သည်းများသည်ရှည်လျားပြီးအာဟာရများကိုလက်ချောင်းထိပ်များသို့မပို့နိုင်ပါကလက်သည်းများသည်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးလွယ်သောသို့မဟုတ်အက်ကွဲလိမ့်မည်။ ခွေးများတွင်လည်းကဗျာများအတွက်ဗီဇအတိုင်းမြေပြင်ကိုစီစဉ်ထားသည်။ ရှည်လျားသောလက်သည်းများရှိသည့်ခွေးများသည်သူတို့၏လက်သည်းများကိုဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မြေပြင်ကိုစီစဉ်သောအခါသွေးထွက်နိုင်သည်။ ပိုင်ရှင်သည်အချိန်မီရှာဖွေခြင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ, ခွေး၏ဖောသည်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးရောင်ရမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်သင်သည် Sepsis ကိုပင်ရနိုင်သည်။
သင်အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းကြိတ်စက်သို့မဟုတ်ခွေးလက်သည်းသံကြိတ်R ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေသည့်အခါသင်၏ခွေးလက်သည်းများကိုဖြတ်ပစ်ရန်။ အကယ်. ခွေးသည်လက်သည်းဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါကခွေးတစ်ကောင်အားကောင်းသောအရာအဖြစ်ပေးနိုင်သည်။ ချုံ့သည့်အခါလက်သည်းညှပ်များသည် 45 ဒီဂရီရှိုနေသင့်သည်။
အကယ်. ၎င်းသည်လက်သည်း၏ပန်းရောင် area ရိယာ၌3မီလီမီတာခန့်ထားခဲ့ပါကအလင်းရောင်လက်သည်းဖြစ်ပါကသွေးထွက်ခြင်းကိုမဖြတ်နိုင်ပါ။ မှောင်မိုက်လက်သည်းများပေါ်တွင်သွေးလိုင်းများကိုသင်မမြင်နိုင်ပါကသင်သတိထားရန်, အကြိမ်အနည်းငယ်ဖြတ်တောက်ရန်နှင့်ကျိုးပဲ့သောအဆုံးကိုဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်. သင်သည်သင်၏လက်သည်းများအလယ်တွင်အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များကိုမြင်လျှင်, ချုံ့ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။
ခွေးများအတွက်လက်သည်းများကိုဖြတ်တောက်သောအခါ, ကဲ့သို့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် - တိကျသောလက်သည်းကတ်ပြားများကိုသုံးပါMini Grinder Cutter,minateure ထောင့်ကြိတ်စက်နှင့်Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်။ သင်သည်လူသားလက်သည်းကတ်ကြေးများသို့မဟုတ်ကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုပါကလက်သည်းများကိုခွဲထုတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
သင်မတော်တဆအသုံးပြုသောအခါသွေးထွက်ဖြတ်လျှင်အသုံးဝင်သော လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်,သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းညှပ်သို့မဟုတ်ကလောင် Mini Grinderသင်၏လက်သည်းများကိုခုတ်လှဲရန်သင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဒဏ်ရာကိုအချိန်မီဝါဂွမ်းဖြင့် နှိပ်. သွေးထွက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်သင်၏ခွေးကိုနှစ်သိမ့်ရန် styptic အမှုန့်ကိုသုံးသင့်သည်။
ရှည်လျားသောလက်သည်းများသည်ခွေး၏လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုတားဆီးရုံသာမကခွေး၏အရိုးကြီးထွားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဒီတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တိုင်းခွေးပိုင်ရှင်ကတစ် ဦး ကိုသုံးဖို့လိုတယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လျှပ်စစ် policerသို့မဟုတ်လက်ကိုင်လက်ကိုင် pollerterတစ်ချိန်ကခွေး၏လက်သည်းများကိုချုံ့ရန်။ ၎င်းကိုအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်အာမခံထားသည်။
သင်၏ခွေးလက်သည်းများ၏သွေးသည်အလွန်ရှည်လျားပြီးခွေးတစ်ကောင်လက်သည်းများကရှည်လျားလွန်းသောကြောင့်တစ်ကြိမ်တွင်လက်သည်းများစွာကိုမဖြတ်ပါနှင့်။ လက်သည်းဖြတ်တောက်ခြင်းကြိမ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့သူတို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချုံ့နိုင်သည်။ လက်သည်းများသည်တဖြည်းဖြည်းတိုလာပြီးသွေးလိုင်းများသည်လက်သည်းများနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုလိမ့်မည်။
သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေး၏လက်သည်းများကိုဖြတ်ရန်အထူးလျှပ်စစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လက်သည်းကွေးနေသူတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုရမည်။ သင်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များကို Wenzhou Mibond Maconder Co. , Ltd. ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းကြိတ်စက် ခွေးလက်သည်းသံကျယ်ပြန့် Mini Grinder Cutter minateure ထောင့်ကြိတ်စက် Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် အသုံးဝင်သောလျှပ်စစ်ကြိတ်စက် သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းညှပ် ကလောင် Mini Grinder ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လျှပ်စစ် policer လက်ကိုင်လက်ကိုင် pollerter